शहरमा नै केन्द्रित जीवन बीमा कम्पनीहरु, हेरौ कुन कम्पनीको कहाँ शाखा कति ? – Insurance Khabar
शहरमा नै केन्द्रित जीवन बीमा कम्पनीहरु, हेरौ कुन कम्पनीको कहाँ शाखा कति ?
प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७५, आईतवार ११:०१
बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण भेगमा जानका लागि बीमा समितिले दबाब दिए पनि जीवन बीमा कम्पनीहरु भने अझै पनि सुगम क्षेत्रमा नै बढी आकर्षित भएको पाईएको छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा जीवन बीमा कम्पनीहरुको शाखा अत्याधिक रहेको छ । उक्त प्रदेशमा कम्पनीहरुको २८० वटा शाखा सञ्चालित छन् ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुको दोस्रो रोजाईमा प्रदेश नम्बर एक परेको छ । सो प्रदेशमा कम्पनीहरुको २३९ वटा शाखा छन भने प्रदेश नम्बर ५ मा २११ वटा छन् । प्रदेश नम्बर १६५ वटा शाखा छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने १२२ वटा जीवन बीमा कम्पनीको शाखा छन् भने प्रदेश नम्बर ७ मा १५५ वटा शाखा छन् । तर, प्रदेश नम्बर ६ भने जम्मा ८१ वटा शाखाहरु छन् । तथ्यांक अनुसार कम्पनीहरु अझै पनि ग्रामिण भेगमा जान नसकेको देखिन्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मुलुकमा नेपाल लाईफ इन्स्यारेन्सको पहुँच धेरै विस्तार भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको मुलुकभर विभिन्न स्थानमा १९८ वटा शाखा कार्यलय छन् । त्यस्तै नयाँ कम्पनीमा युनियन लाईफले सबैभ न्दा बढी आक्रमक देखिएको छ । कम्पनीले बीमा समितिबाट १८४ वटा शाखा सञ्चालनको अनुमती पाई सकेको छ । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १३८, प्राईम लाईफ को १२६, सिटिजन्स लाईफको ११५, प्रभु लाईफको १२२ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् ।
नेपालमा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको प्रवेश सँगै शाखा विस्तार पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कम्पनीले प्रतिस्पर्धा कै लागि भए पनि समितिका शाखा सञ्चालनको अनुमती लिएका छन् । तर, जीवन बीमा कम्पनीहरुले सञ्चालन गरेका शाखामा न्यूनत्तम मापदण्ड पनि पुरा नभएको अभिकर्ताहरु बताउँछन् । बीमा कम्पनीरुले एउटा कोठा लिएर पनि शाखा सञ्चालन गरेको उनीहरु बताउँछन् । कतिपय शाखा कार्यलयमा त कर्मचारी नै नबस्ने अभिकर्ताको भरमा नै चल्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । तसर्थ, शाखा सञ्चालनको लागि न्यूनत्तम पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्नु पर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीहरु सुगम क्षेत्रमा आकर्षित हुनु उचित भए पनि ग्रामिण भेगका मानिसको बीमाको पहुँचबाट बाहिर रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा बढी जोखिम भएकाले बीमा सम्भावना बढी रहने उनीहरुको दाबी छ । त्यसैले बीमा समितिले ग्रामिण भेगमा जानको लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
यूनियन लाइफले न्युनतम संख्यामा कर्मचारीहरु राखी कार्य गर्ने, प्रिमियम अनलाइन मार्फत तिर्न सकिने